Caafimaadka – Somalitop
in : Caafimaadka
Cadaadiska dhiiga oo sareeya wuxuu si aan la dareemeyn u dhaawacaa jirka ilaa iyo inta laga dareemayo astaamahiisa. Hadii aan la maareynin wuxuu qofka ku sababaa, naafo, nolol taya xun iyo wadna qabad halis ah. Qiyaas ahaan kala bar dadka la nool dhiig karka ee aan mareyn waxey u dhintaan xanuunada ku dhaca wadnaha iyo faalug Daweyn iyo qaab nololeedka …
Baaritaanka cirbadda lagu qaado dheecaan ama cadadka jirkaa si loogu baaro shaybaarka. Qaabka dheecaan qaadista waxay leedahay noocyo kala duwan, kuwa ugu caansan waxa kamidan fine-needle aspiration iyo core needle biopsy. Cirbada waxaa loo isticmaali karaa in laga qaado unugyada ama dareerayaasha dareeraha muruqyada, lafaha iyo xubnaha kale, sida beerka ama sambabaha. Sababta loo sameeyo Dhakhtarkaagu wuxuu soo jeedin karaa …
Qiyaas xalay waxaad seexatay xilli dambe. Waxaad hurdada kasoo toostay adigoo aad usii raba hurdada, waxaad go’aansatay inaad seexatid caawa waqti hore si aad usoo gudid hurdada, waxaa laga yaabaa inaad amintid hadii aad ku dartid hurdada waqti dheeri ah inaad soo tooseysid maalinta xigta adigoo faxfax ah. Hurdo badan miyaa wanaagsan? Waxaa badankeen nalagu soo barbaariyay inaan hurdo badan …
Waxaa laga yaabaa inaad subixi qac kasiisid koob shaax ama qaxwo ah si aad furfurnaan uga qaadid, halka dadka qaarkood laga yaabo iney koob biyo qabow ah ku bilaabaan maalintooda. Arimahaas waxey noqon karaan waxyaabaha la sameeyo maalin walbo, hasa yeeshee waxaan manta soo bandhigeynaa arin lagu ogaaday cilmi baaris badan oo ah in marka lacabo biyo diiran subaxdi ay …
Qofnimadeenna waxaa qaabeeya oo qaybta ugu wayn sameeya habka aan wax u xasuusanno oo u xafidno xogaha, dunida maanta waxaa laga cabanayaa xusuus yarida iyo ilowshaha da’walba. Hadaba baarayaasha cilmi nafsiga ayaa arrinta hilmaanshiyaha ah walaac ay ka qabaan darteed daabacay talooyin badan, sidoo kale waxey sameeyeen cilmibaarisyo, waxayna soo jeediyeen tiro aragtiyo ah oo xoojinaya xusuusteenna, horumarinayana habka maskaxdeennu …
Xaniinyo duubad waa xaalad halis oo degdeg ah waxeyna ubaahantahay wax kaqabasho si loobadbaadiyo xaniinyaha raggu isku laablaabmo sigaar ah xididda dhiigga qaada iyo xariga loo yaqaano spermatic cord, xaaladdaan waxey leedahay xanuun daran iyo barar. Isku duubanka xiniinta waxa ay hakinaysaa qulqulka dhiigga soo gaara xaniinyaha taas oo horseedaysa in durba bararo xaniinyaha, arintaan hadan dhaqso looga hortagin keenaysa …